Onye bu ihe agha agha e mere na Canadian kaadị Exchange - Blockchain News
Onye bu ihe agha agha e mere na Canadian kaadị Exchange
Onye bu ihe agha agha na Canadian kaadị Exchange
Na tusde, January 23, 2018, gburugburu 11 m, atọ njikere apụnara mmadụ banyere Canadian Bitcoins ụlọ ọrụ dị na Ottawa na wakpoo anọ òtù nke mgbanwe. Inwe ejikọrọ ha na-eyi egwu na a egbe, ndị omempụ choro nyefee ego nke mgbanwe ha. The ise ọrụ, ndị nọgidere na-hụrụ, akpọ ndị uwe ojii, na-apụnara mmadụ ọsọ na-enweghị ihe.
Otu nke na-enyo enyo, a 19-afọ obibi nke Ottawa, a kpọchiri. Ọ ebubo nke ohi na iji égbè na nchụpụ n'ike njigide. The Ottawa uwe ojii na-achọ abụọ ọzọ ndị na-mpụ.
The Canadian mbipụta CBC News akụkọ na-apụnara mmadụ chọrọ ego na kaadị mgbanwe.
Nke a abụghị nke mbụ agha na ejiri nke Cryptocurrency. na November, a obibi nke New Jersey, Louis Metz, wakpoo ndị nwe nke na agbasa ozi n'ikuku. Egwu egbe, o wepu aja na ekwentị mkpanaaka na onwe igodo, nke o ji nweta digital wallet. N'ihi ya, o zuru a $ 1.8 nde kaadị ego. Ndị dara chere ihu ruo 25 mkpọrọ afọ.
Scientist ihe online ...
Next Post:The mgbakọ na mwepụ gbakọọ ego nke bitcoin maka 2018